Antic ihlolwe laxative "Purgen" (amaphilisi): izinkomba kanye nemiphumela engemihle
Cishe wonke umuntu ebhekene lomkhuba ukuqunjelwa. indle Okuwugqinsi zilethwe mass emathunjini zikhathi ezingemnandi: ubuhlungu, ukusinda esiswini, isicanucanu. Lapho izimpawu zokuqala ukuqunjelwa abantu abaningi zama ukulungisa le nkinga ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi athathe umthamo ukulayisha we purgative eqinile, ngisho ukucabanga ngemiphumela etholwa nezinqubo ezimbi ezenzeka kuleli qophelo emzimbeni.
imithi yesimanje kakhulu eziklanyelwe kujwayeleke umsebenzi obusebenzayo amathumbu, zisekelwe kuphela wokugcinwa umswakama. Ngakho-ke, isikhathi eside ukusetshenziswa engalawuliwe laxatives kungaholela amanzi emzimbeni futhi ngeke senze isimo sishube. Ngaphezu kwalokhu, umuntu ulahlekelwa nomsoco kanye izakhi mkhondo. Yingakho iziguli ezine ukuqunjelwa ezingalapheki kufanele bahlolwe, kodwa hhayi ukuzithiba medicate, hhayi kube kubi nakakhulu.
ithuluzi Old efakazelwe
Namuhla, odokotela musa ukunquma "Purga" (amaphilisi) ukwelapha ukuqunjelwa, ngaphandle iqiniso lokuthi izidakamizwa kunomphumela ongemuhle isibindi kanye nezinso. Kwaphela isikhathi eside sasibhekwa ephumelelayo laxative izidakamizwa esisiza ukuba sibhekane ngokuphumelelayo ukuqunjelwa ezingalapheki. ERussia ngaphambi etholakala izibhebhe 50, 100 mg (namuhla iyawenqabela ukudayiswa). The main izidakamizwa esebenzayo phenolphthalein (a into esetshenziselwa kwamakhemikhali), impahla yayo futhi namuhla sizobe ukukhuluma.
Imithi yokuhlambulula isisu "Purgen" (amaphilisi) abasebenze kwemisipha izicubu kanye kwalapho kuhlangana khona imizwa odongeni emathunjini, ngaleyo ndlela kwande peristalsis yayo. Umuthi siphela ku emathunjini ipheshana imbangela ngeziphambeko ketshezi ukumuncwa, kudala umphumela umuthi, okungase izinsuku.
Tablets ngaphambilini iqondiswa ngezinjongo zokwelapha e esiteji chronic acute lesi sifo (ukuqunjelwa). Umthamo nsuku zonke akufanele budlule mg 300. Ukuze ugweme ukuba umlutha odokotela musa batusa uyisebenzisa isikhathi eside. Phakathi Ukungenisa "Purgen" (amaphilisi) ezigulini waphawula ushintsho umbala umchamo ngenxa yokusabela ane-alikhali. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa kubhekwa evamile - ngemva konyaka lidlule isimo kubuyiselwa.
Imiphumela emibi kanye contraindications
Yiba prescribers wangabaza abadala. Esimeni ukusabela itshelwa ukuthatha carbon ocushiwe futhi ukuze uyeke ukusebenzisa umuthi "Purga" (amaphilisi). Inani laxative ingeqi ruble eziyikhulu. Ngaphambi ukwelashwa bebodwa, odokotela sinconywa ukukhuluma nge onguchwepheshe.
Ezimweni ezingavamile, nomuthi babekwazi kubangele arrhythmias, dermatitis, ukuqubuka, enteritis, nciphisa, albuminuria futhi hypokalemia. Yena okwakwenqatshelwe abantu ukwehluleka kwezinso nokungabekezelelani ngabanye. Analogs lokhu umuthi izidakamizwa ezilandelayo: "Laksoin", "Laksatol", "Isivunguvungu Seqhwa", "Fenaloin".
Odokotela namuhla musa linqume esebenzisa "Purga" (wentengo kwaba ongaphakeme), njengoba kukhiqizwa isikhathi eside, ngoba kubangela eziyingozi, isithuthwane, isifo zezinzwa izimila ngisho abulalayo kwesibindi nezinso. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ngo-2002 wasuka ukudayiswa emazweni amaningi. Uma kukhona lokuzikhethela ke makudle isitshalo ezikhishwe esekelwe walnuts noma Senna.
Gel kusukela varicose emithanjeni "Renova": ukubuyekezwa, imiyalelo, intengo
"Uhonorm" (indlebe amathonsi): izibuyekezo odokotela
Izinga nsuku zonke i-calcium ngoba abesifazane, amadoda kanye nezingane
Wamafutha "Fuziderm": yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
Kungakhathaliseki ithengiswe "onsundu Liquid" Pharmacy: Izibuyekezo
Negesi "Mora" ikholomu: Izibuyekezo
Isinye ukudabuka: Izimpawu, Ukwelashwa
Funchoza futhi abavamile noodle Chinese. iresiphi
Ihhotela AA Grand Oasis kuyona 4 * (Egypt, Sharm el-Sheikh): izithombe kanye nokubuyekeza
IZWE greenhouse izandla siqu. Abamba Ukushisa "Dacha 2Dum": Izibuyekezo
Sebenzisa barrette izinwele yokufakelwa, mina -Princess!
Indlela ukususa Xbox (Windows 10) ngokuphelele?